All Together All Auli'i Cravalho Netflix ရုပ်ရှင်ကားအတွက်၊ သရုပ်ဆောင်ရက်၊ - Netflix ရုပ်ရှင်
All Together All, Premiere နေ့စွဲ၊ Auli'i Cravalho Netflix ရုပ်ရှင်အတွက်အထူးနှုန်းများကိုသရုပ်ဆောင်သည်
အားလုံးအတူတူယခု Auli'i Cravalho နှင့် Judy Reyes Cr တို့ဖြစ်သည်။ ALLYSON Riggs / NETFLIX © 2020
အဆိုပါ Umbrella အကယ်ဒမီရဲ့ Yusuf Gatewood အသက်, Instagram ကို, အခန်းကဏ္:: အ Raymond သရုပ်ဆောင်အကြောင်းကိုသိရန်အရာအားလုံး လူစီဖာရာသီ ၅၊ အပိုင်း ၁ ရက်ဖြန့်ချိသည့်နေ့၊ သွန်းခြင်း၊ နောက်တွဲယာဉ်၊ အနှစ်ချုပ်များနှင့်အခြားအရာများ
All Together All သရုပ်ဆောင် Premiere date, promo နှင့် Auli'i Cravalho အကြောင်းသိရန်အရာအားလုံး Netflix ရုပ်ရှင်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
တစ်နိုင်ငံလုံးရုပ်ရှင်ရုံများပိတ်ထားဆဲဖြစ်သော်လည်းနွေရာသီရုပ်ရှင်ရာသီဥတုကိုပုံမှန်ထက်ပိုမိုနှေးကွေးစေပြီး Netflix သည်ပရိသတ်များအားလစဉ်နှစ်မျိုးစလုံးအားဖြင့် blockbuster caliber ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများအပါအ ၀ င်ရုပ်ရှင်အသစ်များကိုပေးနေသည်။ အစောင့်ဟောင်း နှင့်ပိုမိုပေါ့ပါးမိသားစုထိုကဲ့သို့သော၎င်း၏လာမည့်ဖြန့်ချိအဖြစ် အားလုံးအတူတူယခု, ကြည့်ရှုသူမွေ့လျော်ရန်သေချာသည်!
Matthew Quick ၏ဝတ္ထု Sorta Like Rock Star ကို အခြေခံ၍ အားလုံးအတူတကွယခု အရိုးရှင်းဆုံးအသုံးအနှုန်းများမှာအမှောင်ဆုံးကာလ၌မျှော်လင့်ချက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်သောဂီတပါရမီရှင်အထက်တန်းကျောင်းသားတစ် ဦး မှ Carnegie Mellon သို့တက်ရောက်ရန်သူမ၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Netflix ကမှန်ကန်စွာလုပ်နိုင်သည်ကိုသက်သေပြနိုင်သည့်အရာတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်ကားများကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။ သက်သေလိုအပ်ပါတယ်, များ၏အကြိုက်ဖို့မနောက်ထပ်ကြည့်ရှုပါ အားလုံးယောက်ျားလေးများမှ ဂိမ်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောတချွတ်ရုပ်ရှင်၏လူကြိုက်များ Sierra Burgess ဟာရှုံးနိမ့်သူတစ်ဝက်၊ ဒါမှမဟုတ် အဆိုပါနမ်းတဲ။ ဖြစ်ကောင်းအတော်လေးအဖြစ် buzzed မဟုတ်နေစဉ်, ငါတို့အချို့ပါပဲ အားလုံးအတူတကွယခု မကြာမီ၎င်း၏ဖြန့်ချိအပေါ်သို့စာရင်းပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။
Netflix သည်ယခုသြဂုတ်လတွင် Netflix တွင်ပြသရန်စီစဉ်ထားပြီးသည့်နောက်တွင် Netflix မှပရိသတ်များအနေဖြင့်သရုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Premiere date နှင့်လာမည့်လာမည့် Auli'i Cravalho ရုပ်ရှင်ကို ဦး ဆောင်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးဓာတ်ပုံများကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်။
သရုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဦး ဆောင်နေသူမှာ Auli'i Cravalho ဖြစ်ပြီးဒစ္စနေး၏ခေါင်းစဉ်ဇာတ်ကောင်ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် Moana ။ Cravalho သည်ရုပ်ရှင်၏အဓိကဇာတ်ကောင် Amber Appleton အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Netflix ကဂီတပါရမီရှင်အထက်တန်းကျောင်းသူအဖြစ် Carnegie Mellon သို့တက်ရောက်ရန်ဆန္ဒပြင်းပြသူဖြစ်သည်။ Cravalho ကာတွန်းကား၌ထငျရှားနှင့် NBC ရဲ့ဂီတဒရာမာအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောရုပ်မြင်သံကြားအခန်းကဏ္ held ကျင်းပလျက်ရှိသည်နေစဉ် ထကြ သူမ၏ပထမဆုံး live-action ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုအမှတ်အသားပြုလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးမင်းသမီးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသရုပ်ဆောင်ကားတစ်စီးကိုကျွန်ုပ်တို့မစဉ်းစားနိုင်ပါ။
ရုပ်ရှင်၏ကြယ်ပွင့်ပါဝါကိုထည့်သွင်းခြင်းသည် Fred Armisen ဖြစ်သည်။ Amber ၏ဒရာမာကလပ်ခေါင်းဆောင် Mr. Frank၊ Justina Machado သည် Amber ၏တစ်ကိုယ်ရေမိခင် Becky နှင့်ဒဏ္theာရီ Carol Burnett တို့ဖြစ်သည်။
သရုပ်ဆောင်ထွက်သွားတာကတော့ Rhenzy Feliz, Judy Reyes, Taylor Richardson, C.S. Lee, Anthony Jacques Jr. နှင့် Gerald Isaac Waters တို့ဖြစ်သည်။
အကြောင်းကိုရုပ်ရှင် Peppermint ဘာလဲ
အားလုံးအတူတူယခု Premiere နေ့စွဲ
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Netflix ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆယ်ကျော်သက်ဒရာမာထွက်စစ်ဆေးနေမျှော်လင့်ပရိသတ်များ, ရှည်လျားသောစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုပါ! Netflix ကသြဂုတ်လတွင်ဖြန့်ချိမည့်အစီအစဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်အတည်ပြုခဲ့သည် အားလုံးအတူတကွယခု သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပျော်စရာကောင်းသောမိသားစုရုပ်ရှင်အတွက်မည်သူမဆိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောတနင်္ဂနွေနာရီဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် Netflix သည်အထူးနှုန်းများထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ အားလုံးအတူတကွယခု သို့သော်သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိမည့်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီတရားဝင်တရားဝင်နောက်တွဲယာဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သင့်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
အပေါ်ကလှောင်ထားတဲ့အတိုင်း အားလုံးအတူတကွယခု သူမအထက်တန်းကျောင်းဘဝကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုသည့်အမ်ဘာအက်ပလီတန်၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်။ အထူးသဖြင့်သူသည်ဒရာမာကလပ်မှတစ်ဆင့်စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သောအနုပညာအပေါ်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှု၊ သူမနှင့်သူမ၏မိခင်ကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကူညီရန်အချိန်ဖြုန်းရန်အတွက်ဒိုးနပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ အငြိမ်းစားအသိုင်းအဝိုင်း။ တနည်းအားဖြင့်သူမသည်သင်၏ပျှမ်းမျှအထက်တန်းကျောင်းသားထက်ပိုပြီး juggling လုပ်နေပေမယ့်သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့မမျှော်လင့်ပါဘူး။
ဤတွင် Netflix သည်ရုပ်ရှင်အကြောင်းဖော်ပြသည်။
Amber Appleton သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိတည်ငြိမ်မှုမရှိသော်ငြားလည်းအကောင်းမြင်သူရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဂီတထူးချွန်ထက်မြက်သောအထက်တန်းကျောင်းသူ Carnegie Mellon သို့တက်ရောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်သောအမ်ဘာသည်မစ္စတာဖရန့်ခ်က ဦး ဆောင်သည့်သူမ၏ချစ်မြတ်နိုးသောအထက်တန်းကျောင်းဒရာမာကလပ်ကိုအလှပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သူမနှင့်သူမအမေကိုကူညီရန်ကူညီသည်။ သူမသည်ဒေသခံအငြိမ်းစားလူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းတွင်လည်းအချိန်ကုန်ခံပြီးသူမအနှစ်သက်ဆုံးအဆိုးမြင်နေထိုင်သူကိုဂရုစိုက်ပြီးဂရုစိုက်သည်။ သူမ၏အိပ်မက်များကိုခြိမ်းခြောက်နေသောအတားအဆီးအသစ်များပေါ်လာသောအခါ Amber သည်သူမရွေးချယ်ထားသောမိသားစု၏ရှေ့သို့တိုးတက်ရန်အားကိုးအားထားရမည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာအနှစ်ချုပ် ရုပ်ရှင်ရဲ့တရားဝင် Netflix ကစာမျက်နှာ ရှည်လျားသောပုံစံအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းမဟုတ်သောဇာတ်လမ်းမှအသေးစိတ်၏အပိုဆောင်းအလွှာကထပ်ပြောသည်။ ကြိုတင်သတိပေးခြင်း၊
အကောင်းမြင်သောဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်ကြီးမားသောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုတွယ်ကပ်ထားသည်။ သူသည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီးကျောင်းဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်နေထိုင်သည်။ ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးများကြုံတွေ့ရသောအခါသူသည်အကူအညီပေးရန်လက်ကိုလက်ခံရန်သင်ယူနိုင်ပါသလား။
All Together Now ရုပ်ရှင်အမည်ပြောင်းသည်
၏အနှစ်ချုပ်နှင့်သွန်းလျှင် အားလုံးအတူတကွယခု အကျွမ်းတဝင်အသံဖြစ်သော်လည်းရုပ်ရှင်၏ခေါင်းစဉ်မှာအကြောင်းပြချက်ကောင်းမရှိပါ။
အဲဒီမှာမည်မျှရာသီ Riverdale ဖြစ်ကြ၏
ဘယ်တော့လဲ Netflix သည်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကိုစတင်ကြေငြာခဲ့သည် စီမံကိန်းအတွက်ထိုရုပ်ရှင်သည်၎င်းကိုအခြေခံထားသည့်စာအုပ်နှင့်နာမည်တူတူမျှဝေရန်ဖြစ်သည်။ ရော့ခ်စတားလိုပဲ Sorta ။ Netflix ကရုပ်ရှင်၏အမည်ကိုပြောင်းလဲရန်အဘယ်ကြောင့်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကိုမသိရသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည် ရော့ခ်စတားလိုပဲ Sorta နှင့် အားလုံးအတူတကွယခု တ ဦး တည်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။
တရား ၀ င်နောက်တွဲယာဉ်ကိုစောင့်နေစဉ် Netflix ကပရိသတ်များကို Auli'i Cravalho၊ Amber၊ Fred Armisen၊ Frank Frans, Carol Burnett နှင့် Joan စသည့်ရုပ်ရှင်၏အဓိကဇာတ်ကောင်များနှင့်ရုပ်ရှင်၏အခြားအဓိကကစားသမားများကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ Rhenzy Feliz ၏ Ty, Amber ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းအဖြစ်။
အားလုံးအတူတကွယခု Cr ။ Allyson Riggs / NETFLIX © 2020
ပြီးခဲ့သည့် airbender အသစ်သောဖြစ်စဉ်များကိုယ်ပွား
ဘယ်အချိန်မှာအမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင် netflix ပေါ်ထွက်လာသနည်း
Pacific Rim2လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ